SomaliaReport: Duqayn Cirka oo Dishay Al-Shabaab iyo Shacab
By AWEYS CADDE 10/21/2011
Sarkaal ayaa sheegay in ugu yaraan 35 qof, oo ay ku jiraan 21 dagaalyahano al-Shabaab ah la dilay 49 kalana ku dhaawacmeen ka dib markii ay diyaaradi duqaysay labo xerooyin tababarka al-Shabaab ee u dhexeeya degmooyinka badhaadhe iyo Raas Kaambooni ee Gobalka Jubada Hoose maalintii Jimcaha.
"Waxaan maqalnay oo aragnayna qarax weyn iyo qiiq madow oo meel walba qabsaday. Waxaan aamisanahay inay ahayd diyaarad Mareykan leeyahay," shaqaale dhuxuleed, Geele Cabdi Faarax ayaa Somalia Report u sheegtay. Wuxuu soo tebiyey inuu arkay meydadkii 21 dagaalyahano al-Shabaab ah iyo 14 shicib ah iyo ugu yaraan 49 qof oo ku dhaawacmay weerarka. Teeda kale, Sarkaal ciidamada DKMG ee Jubbada Hoose, oo codsaday inaan la magacaabin ayaa sheegay ayaa Somalia Report u sheegay in diyaarado duqeeyeen xerooyinka al-Shabaab, laakiinse uusan hubin yihiin diyaaradaha basaaska Mareykanka ama diyaaradaha ciidamada Keenya.
"Waxaan ka warhaynay in labo xeroo waaweyn oo al-Shabaab leedahay la duqeeyey lana burburiyey, laakiinse ma xaqiijin karo inay diyaaradaha basaaska yihiin ama diyaaradaha tooska u kaca ee Kenya. Waxay ila tahay inay ahaayeen diyaaradaha tooska u kaca ee Kenya maadaama ciidamada Kenya iyo dagaalyahanada Raas Kaamboni ay kaga dagaal jiraan halkaas," ayuu sharxay. Subixii Khamiista, ciidamo taabacsan malaysiyada Raas Kaambooni iyo xoogaga Kenya ayaa qabsaday degmada muhiimka ah ee Raas Kaambooni oo u dhow meesha diyaaraduhu duqeeyeen JImcihii.
Raas Kaambooni waa saldhiga ugu weyn ee al-Shabaab ku leedahay koonfurta Soomaaliya oo loogu talagalay in lagu tababaro dagaalyahanada cusub. Raas Kaambooni waxay saldhig u ahayd Sheekh Xasan Abdullaahi (Xasan Turki), oo la aaminsan yahay inuu dhisay xag jirayaasha Muslimiinta ah ee Soomaaliya.
Ugu yaraan todoba duqayn dhulcireed ayaa ku dhacay Jubbooyinka Hoose shan bilood gudahood, oo lala eegtay xerooyinka tababarka al-Shabaab. Duqaynta waxay dhacday maalin ka bacdi markii madaxweynaha Keenya, Mwai Kibaki uu ammaanay askarta Keenya ee gudaha Soomaaliya kula dagaalamaya fallaagada al-Shabaab iyo in dowlada ay samaynayso waxkasta oo ay ku badbaadinayso Keenya.